Nyango Star, Ilay Endrika Famantarana Miendrika Paoma Mively Ampongamaroanaka Hanavotana ny Faritr’i Tohoku Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2017 5:47 GMT
Nyango Star mively ampongamaroanaka amin'ny hira Japoney malaza “idol”/tarika mpihira metaly fusion BABYMETAL. Pikantsary avy amin'ny Nyango Star fantsona YouTube ofisialy.
Hatramin'izao aloha, nisy nampita sioka in-91.000 ary nahazo ekeko miisa 113.000 ny lahatsary “Anpan March” hira avy amin'ny fandaharana malaza iray hoan'ny ankizy ao amin'ny fahitalavitra ahitana an'i Nyango Star mitendry ampongamaroanaka.
Tsy mihonona amin'ny feon-kira raoka fotsiny toy ny ‘Crimson’ (Kurenai, 紅) an'i X Japan izy, fa milalao ny Dian'i Anpan ho an'ny ankizy i Nyango Star eto!
Endrika famantarana ‘yuru-chara’ avy any Kuroishi, ao afovoanin'ny prefektioran'i Aomori, any avaratra atsinanan'i Japana, i Nyango Star. Ny teny hoe ‘Yura-chara’ dia fitambaran'ny teny Japoney hoe “mazava fo sy tsara fanahy” sady fanafohezana ny teny hoe “toetra” na endrika famantarana. Mirehareha amin'ny endrika famantarana iray na maromaro toy izany ny faritra rehetra ao Japana.
Araka ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Reddit :
Azafady, fantaro fa endrika famantarana yuru-chara avy any Japana i Nyango Star izay misolontena ny prefektioran'i Aomori, ampahany amin'ny faritra Tohoku izay ravan'ny horohorontany sy ny tsunami tamin'ny 11 Martsa 2011. Noho izany, isaky ny miseho vahoaka i Nyango Star dia ny hampandroso ny faritra sy ny hanampiana amin'ny fahasitranan'ny feriny tamin'ny voina izay. Tsy mively ampongamaroanaka ho amin'ny tombontsoany manokana izy, fa hanavotany ny tanindrazany malalany izay.
Nahazo ny bikany avy amin'ny paoma izay nampalaza an'i Aomori tao Japana i Nyango Star. Toa hita miendrika saka ihany koa ilay endrika famantarana. Raha atambatrao ny feo ataon'ny saka amin'ny teny Japoney (nyan) sy ny tontolo Japoney milaza ny “paoma” (ringo), dia mahazo ny anarana hoe Nyango ianao. Avy amin'ny anaran'ilay mpively amponga malazan'ny Beatles Ringo Starr ny sisa amin'ny anaran'ila endrika famantarana Aomori.
Ao anatin'ity lahatsary ity, hita mively ampongamaroanaka amin'ny hira “tena sarotra” “Crimson” (Kurenai, 紅) an'ny tarika mpihira rock malaza X Japan ao amin'ny foiben-kolontsain'ny mpianatra oniversite ao amin'ny prefektioran'i Aomori i Nyango Star .
Maro amin'ny lahatsarin'i Nyango Star mively ampongamaroanaka no azo jerena ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Nyango Star, sy ao amin'ny pejiny Twitter, Instagram ary YouTube. Azo jerena ao amin'ny bilaogin-kolontsaina pop Japoney Grapee ny fanazavana bebe kokoa amin'ny teny Anglisy momba an'i Nyango Star.